Uma sikhuluma carbines, umuntu angekhe atjho mayelana ingebe Tactical "Boar 12" kusukela "Hammer" zalesi sihlahla. Lokhu ingebe ejwayelene zonke umzingeli futhi bayindlala kakhulu phakathi kwabantu.
Imininingwane izikhali ukuliqaqa
Kulesi ukuguqulwa HPE 205 carbine emgqonyeni ubude 420 mm, lapho arrester, kwabhoboka nomlomo. Lesi sakamuva kuyadingeka uma kokudubula izinhlamvu "Magnum" ngenxa obuphelele enganele umgqomo ukuze asule flash. Carbines "Wild Boar" ayihlomele lesitolo 8 imizuliswano. Ungase uphawule eziningi imigoqo kanye amadivayisi sextant lolwengetiwe, kwenta sibonelo, phezu umamukeli - ukunamathisela kalimatornoy yokukhanya phezu ibhodi lemisindo futhi isiqu ngezansi ukukhwezwa flashlight nokushaya isibambo. Ababili side panel kungase kudingeke ukufaka designator laser noma ukuhlukahluka yalezi amadivaysi kubo. Isikhali okuzenzakalelayo ifakwe kalimatornym emehlweni "Hakka" uhlobo avaliwe benethuba izinguquko ngokuya ukugqama, usayizi, amile izinguquko lateral. Carabiners "Wild Boar" has zonke uhlelo ajwayelekile ezishintshayo. izikhali disassembly ilula: sithathe umamukeli, susa entwasahlobo, uzimele kanye yokucina. Ukuze ususe ibhodi lemisindo, ukukhulisa isigwedlo futhi asuse ipayipi igesi (i isilinda ezingenalutho, edlala indima khaphi piston). Kulesi sigaba of disassembly futhi ungakhohlwa ukususa iphilisi-pusher. Lokhu piston encane - the imininingwane ehilelekile, ngenxa lapho isibhamu abazingeli "Wild Boar" (futhi "Saiga-12" futhi "Saiga-20") usebenza lemukelekako, kusukela surface area kwanda amagesi. Ngo ukuguqulwa 410 akusiyo. Ngenxa yalokhu, zabanikazi kungaba uhlangabezana nezinkinga lapho ukulayisha kabusha izikhali.
Carabiners "Wild Boar": Ngokungafani "Kalash" futhi "Saiga"
"Boar 12" senziwa ngesisekelo RPK. Umahluko lokhu kusukela carbine Kalashnikov umamukeli wenziwe metal obukhulu. Kusukela "Saiga" ke uyahluka ngokuthi okwami esitolo - uhlobo wezindlela (lokhu kufana isibhamu ingebe M16). Kuheleza isibhamu kwenziwa lula isandla, uzimele has a alo isitokwe "esihlathini 'ukulungisa lapho ngokudubula ngaphandle yokukhanya namandla kalimatora kanye nabo, okungukuthi, ngokulandelana, efakwe ngenhla noma ngezansi. Phezu kwalesi carbine ifakwe mfutho iraba ukushaqeka. Top futhi evulekile ezingemuva emehlweni izibhamu awuhlobo kungase kushintshwe ukuphakama futhi nendawo.
Carbine "izingulube": Izibuyekezo
abanikazi abaningi bathi nokwethenjelwa esenzweni mbutho. Ngempela, wenza qualitatively. Ngesikhathi "Hammer" kuyinto esizuzisa ukwedlula e Izhevsk, balandisa ekuthuthukeni kwabo. Ngokwesibonelo, lula (okuyinto anikezwa ngezingwegwe "Wild Boar" ukuguqulwa 12 HPE 205) yikhono ingalo futhi ukucisha izingalo ukuphepha ngaphandle kokuthinta okhiye ngokucindezela umunwe isigwedlo amanga esibangelini. Futhi ukukghoneka wokususa esangweni kubambezela okukodwa eseduze inhlamvu. Lokhu ngesihluku lokushaya izikhali ekhiqizwa eRussia, ngisho e-Melika athandwayo - amaphoyisa enqamula othenga yona ukuhlasela kwalo izindiza, okuyilona elisebenzayo futhi kube inkomba yokuthi izinga okusezingeni eliphezulu nokwethembeka.
Wall umnikazi for ibhayisikili: Izinketho kanye nencazelo